Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Xeloda ကင်ဆာစားဆေး
Sun, Nov 25, 2012 at 11:11 AM
My name is (့). I am 16 years old and I am studying in (့). I came here last year with my family from Yangon. My father is 49 years old and he has colon cancer. When he knew he had colon cancer it was already in stage 3. So he did chemotherapy and surgery in 26 October 2011 here. His surgery was successful and now he is using the colostomy bag. He also did 8 chemotherapy courses after his surgery. Right after chemotherapy the doctor told him to take the tablet called XELODA 500MG twice daily for2weeks. After that, he did his first medical checkup on 15 April 2012. The results showed nothing was in his body anymore. But He still does medical checkup every six months after his surgery. The last time he did medical was on9October 2012. The result showed that there were three tumors (about3cm diameter) in his colon and two tumors (about2cm) in liver which are reappearing. So he needs to do the chemotherapy again starting from next week. But my dad wants to start taking the tablet XELODA 500MG before he starts his chemotherapy. The doctor did not tell him to take any medicine yet but he wants to take the tablets before he start the chemotherapy again. Is it OK if he takes that? My father also read lots of Myanmar Traditional Medicine articles from online. He is also drinking Papaya Leave Powder with hot water every day. What are the benefits from drinking that? Is it OK to continue drinking that?
Xeloda (Capecitabine) ဆေးဟာ ကင်ဆာစားဆေးတခုဖြစ်တယ်။
• Metastatic breast and colorectal cancers အဆင့်နောက်ကျနေတဲ့ ရင်သားကင်ဆာ နဲ့ အူမကြီး ကင်ဆာတွေမှာ အများဆုံးသုံးတယ်။
• Adjuvant in colorectal cancer Stage III အူမကြီးကင်ဆာအဆင့် (၃) မှာ သူ့ကို ဦးစားပေး တခုတည်း သုံးတယ်။
• Metastatic colorectal cancer တခြားနေရာကိုပြန့်နေပြီဖြစ်တဲ့ အူမကြီးကင်ဆာမှာလဲ အဆင်ပြေရင် သူ့ကို ဦးစားပေး တခုတည်းသုံးတယ်။
• Cancer of the colon after surgery အူမကြီးကင်ဆာ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မှာလဲသုံးတယ်။
• Metastatic breast cancer တခြားနေရာကိုပြန့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာမှာလဲ သူ့ကို Docetaxel နဲ့တွဲပြီး Anthracycline-based treatment နဲ့မရရင်သုံးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Paclitaxel-based treatment နဲ့ Anthracycline-based treatment နဲ့ မရတော့ရင် သူ့ကို တခုတည်းပေးတယ်။
• 150-mg ဆေးပြားနဲ့ 500-mg ဆေးပြားတွေရှိတယ်။
• အစပိုင်းမှာ 2,500 mg/m2/day တနေ့မှာ ၂ ခါခွဲပေးတယ်။ ၂ ပတ်ကြာပေးမယ်။ ၁ ပတ်နားမယ်။ ၃ လ တခါ အဲလိုနည်းအတိုင်း ပေးမယ်။
• ကျောက်ကပ် သိပ်မကောင်းသူဆိုရင် ၂၅% လျှော့ပေးမယ်။ ကျောက်ကပ် မကောင်းတော့ရင် ဒီဆေးမပေးဘူး။ အသက်သိပ်ကြီးနေရင်လဲ လျှော့ပေးမယ်။
• မနက်စာမစားခင် မိနစ် ၃ဝ မှာ ပဌမဆေးလုံးသောက်ပါ။ ညစာမစားခင် မိနစ် ၃ဝ မှာ ဒုတိယဆေးလုံးသောက်ပါ။ ရေများများနဲ့သောက်ပါ။
• တကယ်လို့ ဆေးသောက်ဘို့ မေ့သွားရင် ၂ လုံးတခါတည်း မသောက်ပါနဲ့။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရရင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေစဉ် ဒီဆေးမသောက်ရပါ။
• ဆေးကို (အလာဂျီ) ရရင် (မတည့်ရင်) မသောက်ရပါ။
• ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ အသဲအခြေအနေတွေ စစ်ဆေးပြီးမှ ဆေးပေးမယ်။
• Folic acid ဖေါလစ်အက်စစ်၊ ဖေါလစ်အက်စစ်ပါတဲ့ ဗီမာတင် (ဘီ) အုပ်စုဆေး နဲ့ (မာလ်တီဗီတာမင်) ဆေးတွေ သောက်နေတာဆိုလဲ ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အစကတည်းက ရောဂါရှိနေရင် သိသာတယ်။ အရေပြား ထုံ-ကျင်၊ နီရဲ၊ အပူဖူးပေါက်၊ ဝမ်းပျက်၊ ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်ရောင်၊ သွေဖြူဥနည်း၊ သွေးမှုံနည်း။ အသဲ။ အသားဝါ။
သာမန် ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ဗိုက်အောင့်၊ ဝမ်းချုပ်၊ အစားပျက်၊ ရေဓါတ်နည်း၊ အရေပြားအနီပြင်ထွက်၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ လက်သည်-ခြေသည်းတခုခုဖြစ်၊ မောပန်း၊ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ပူ၊ ရင်ပတ်နာ၊ ခါးနာ၊ ကြွက်သားနာ၊ အိပ်ရေးပျက်၊ အရသာပျက်၊
ကင်ဆာရှိနေတာသိလို့၊ ဒါမှမဟုတ် ကင်ဆာက ဆက်တိုးနေလို့ ဆေးအသစ်သောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဆုံးအဖြတ်က ခက်တယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 10:11 PM